လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီသောက်ခြင်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ – Shwehealth.com
24. ဇှနျ 2016 23. မေ 2016
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် လက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်းသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက စတင်၍ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြသော စွဲမြဲနေသည့် အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အနေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့တိုင်းတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အများစုမှာ နေ့ပိုင်းတစ်နေ့လုံးဖွင့်လေ့ရှိပြီး အချို့ဆိုင်များမှာ ၂၄ နာရီ ပတ်လုံး ဖွင့်ကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြို့အတော်တော်များတွင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှာ၍ လက် ဖက်ရည်သောက်ရန် မခက်ခဲလှပေ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တိုင်းတွင် လက်ဖက်ရည်နှစ်မျိုးရနိုင်သည်။ ယင်းတို့မှာ လက်ဖက်ရည်အချိုနှင့် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတို့ဖြစ်ကြသည်။
လက်ဖက်ရည်အချိုကို လက်ဖက်ရွက်အချိုခြောက်ကိုနှပ်ထားသော အကျရည်၊ နို့ဆီ၊ နို့စိမ်း သို့မဟုတ် နွားနို့ဖြင့် ဖျော်စပ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ဖက်ရည်အချိုဖျော်စပ်ရာ၌ သကြားကို အသုံးပြုခြင်း မရှိကြပေ။ အခြားလက်ဖက်ရည်အမျိုးအစားများဖြစ်သည် လီမွန်တီးကဲ့သို့သော အရာ များကိုလည်း ရရှိနိုင်သေးသည်။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ကြသည်။ ယင်းမှာ ပွက်ပွက်ဆူ အောင်ကြိုထားသောရေတွင် လက်ဖက်ခြောက်ခပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ဆိုင်သို့လာ ရောက်သူတိုင်းအတွက် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။ ကော်ဖီစေ့ကို ကြိတ်ထားသော ကော်ဖီမှုန့်ဖြင့်ဖျော်စပ်ထားသော ကော်ဖီကိုလည်း ရရှိနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကော်ဖီ သောက်သူအများစုသည် ယခုအခါ Nescafe ကဲ့သို့သော အသင့်သုံးကော်ဖီမစ်များကို ပို၍ သောက် သုံးလာကြသည်။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၍ အပေါင်းအသင်းများနှင့် စကားပြောကြခြင်းမှာ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ စွဲမြဲနေ သောအလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် လက်ဖက်ရည် (လက်ဖက်ရည်ကြမ်း)၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ကော်ဖီနှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ခန္ဓာကိုယ်၏ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ပြည့်စေနိုင်ခြင်း
လက်ဖက်ရည်နှင့် ကော်ဖီနှစ်မျိုးစလုံးသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေး နိုင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ခြားနားချက်မှာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် လက်ဖက်၏နှစ်သက်ဖွယ် အနံ့ ၊ အရသာပါဝင်သည့် ရေသက်သက်သာ ဖြစ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း (အပူဖြစ်စေ၊ အ အေးဖြစ်စေ) သည် ချွေးထွက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ပူအိုက်သောရာသီဥတုကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်မှ ဆုံးရှုံးသွားသော ရေဓာတ်များကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည်။
(၂) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုံ့ဆော်မှု
လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီနှစ်မျိုးစလုံးတွင် ကဖင်းဓာတ်အားဖြင့် တူညီစွာပါဝင်ကြပြီး လှုံ့ဆော် မှုကို ဖြစ်စေသော ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကော်ဖီတွင် ဖိနှိပ်ခြင်းအကျိုးပိုများသည်။ အ ဓိပ္ပါယ်မှာ ကော်ဖီသည် သင့်၏ခန္ဓာကိုယ်မှ စွမ်းအားကို လျော့ကျစေနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လက်ဖက် ရည်ကို မအိပ်ချင်စေရန်၊ ပညာလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် တရားထိုင်ရန်အတွက် လွန်ခဲ့သောနှစ် ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းက အသုံးပြုလာကြခြင်းဖြစ်ပြီး ကော်ဖီမှာမူ နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်မှ နာ မည်ကျော်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဖက်ရည်သည် စိတ်ကြည်လင်မှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးတို့နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့အပြင် ကော်ဖီတွင် ပါဝင်သော ကဖင်းဓာတ်သည် လက်ဖက်ရည်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျော့ကျလွယ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးကို တစ်နေ့လုံးရရှိလိုပါက လက်ဖက်ရည်သည် ပို၍ကောင်းသော ရွေးချယ် မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၃) ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း
လက်ရှိအချိန်တွင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် အချို့သောကင်ဆာအမျိုးအစားများ၏ ဖြစ်ပွားမှု နှုန်းကို ကောင်းစွာ လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း လေ့လာမှုများစွာတွင် တွေ့ရှိထားကြသည်။ ကော်ဖီတွင် ယင်းကဲ့သို့သော ကောင်းကျိုးကို မရရှိနိုင်ပေ။
(၄) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် ဂုဏ်သတ္တိများ
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ အခြားမော်လီကျူးများ၏ ဓာတ်တိုးခြင်းကို ဆန့်ကျင် သည့် မော်လီကျူးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်တိုးခြင်းဆိုသည်မှာ free radicals များကို ထုတ်လုပ်ပေး နိုင်သော ဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းတို့က ဆဲလ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သော ကွင်းဆက်ဓာတ် ပြုမှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် သင့်အားလန်းဆန်းစေခြင်း၊ စိတ်ခံစား မှုကောင်းစေခြင်း၊ ကျန်းမာပြည့်စုံသော ခံစားမှုကိုရစေခြင်း စသည့်အကျိုးများကို ရစေနိုင်သည်။ လက် ဖက်ရည်တွင် ကော်ဖီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း အလွန်များပြားစွာ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
လတ်တလောလေ့လာမှုများအရ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျစေရန် ကောင်းစွာအကူအညီပေးနိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိထားကြသည်။ လက်ဖက်ရည်သည် ရေငတ်ပြေစေရုံ သာမက ခန္ဓာကိုယ်၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုလည်း ပို၍ လျင်မြန်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကော်ဖီတွင် ကယ်လိုရီများစွာပါဝင်နေချိန်တွင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းမှာ ကယ်လိုရီလုံးဝပါဝင်ခြင်းမရှိသည့် သောက် သုံးစရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ခံတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတွင်လည်း လက်ဖက်ရည်သည် ကော်ဖီထက် များစွာပို၍ ကောင်းကျိုးပေးနိုင်သည်။ လက်ဖက်ရည်တွင် သင်၏သွားများအတွက် ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သော ဖလိုရိုက်ဒ် ဓာတ်များစွာပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် အစားတစ်ကြိမ်စားပြီးတိုင်း လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတစ် ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် အနံ့ဆိုးများကို ကာကွယ်နိုင်မည့်အပြင် ပါးစပ်ချွဲခြင်းလည်း ဖြစ်ပွားမှုနည်းစေ နိုင်သည်။ အခြားအချက်တစ်ခုမှာ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် ကော်ဖီကဲ့သို့ သင်၏သွားများကို အရောင်ပြောင်းစေမည် မဟုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကို ပုံမှန်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အရိုးများကို ပိုမိုသန်မာစေရုံသာမက အရိုး ပွခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့နည်းစေသည်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် ကျန်းမာသော အရိုးများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုလည်း အားပေးသည်။ ယင်းကောင်းကျိုးများကို ကော်ဖီတွင် တွေ့ရှိရမည် မဟုတ်ပေ။
(၈) စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်
လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ဆေးတစ်မျိုးအနေဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင် ကြောင်း လေ့လာမှုအချို့တွင် တွေ့ရှိထားကြသည်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေသည့်အချိန်တွင် လက်ဖက်ရည် ကြမ်းတစ်ခွက်သောက်လိုက်ခြင်းက သင်၏စိတ်ဓာတ်ကို ပြန်လည် မြင့်မားလာစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင် လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည် သင်၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ယင်းကို ကော်ဖီသောက်ခြင်း ဖြင့် ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
Posted in အစားအစာနှငျ့ သောကျ